भारतले संविधानको स्वागत गरेन भन्ने कुरा होइन - Karobar National Economic Daily
भारतले संविधानको स्वागत गरेन भन्ने कुरा होइन
query_builderAugust 29, 2017 8:06 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility502
डा. नारायण खड्का केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्का पूर्वसहरी विकास मन्त्री हुन् । उदयपुर क्षेत्र नं. १ बाट संविधानसभामा निर्वाचित खड्काले पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईको सल्लाहकार तथा सहयोगी र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालि सकेका छन् ।
भोजपुरमा जन्मेका खड्काले विद्यार्थी राजनीतिमार्फत २०२३ सालमा राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन् । पुना, भारतबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका खड्काको विशेष रुचि अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो ।
उनका राजनीति र अर्थनीतिसँग सम्बद्ध विश्लेषणात्मका लेखहरू प्रकाशित हुँदै आएका छन् । खड्कासँग कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण, नेपाल–भारत–चीन सम्बन्ध तथा व्यापारबारे गरेको कुराकानीको सार ः
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको यो प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथो पटकको भारत भ्रमण हो । सन् १९९६, २००२, २००४ र अहिले २०१७ मा । पहिलो पटक उहाँ भारत जाँदा पञ्चेश्वर र टनकपुरको कुरा आयो । त्यसमा विवाद पनि भयो ।
दोस्रो पटक जाँदा उहाँले केही अन्य सम्झौता तथा सुरक्षाको कुरा गर्नुभयो । अहिले आएर पुरानो आफूले गरेको सन्धि–सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने थियो भने अर्कातिर यो बीचमा नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिँदै गएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने थियो । खास गरेर मधेसका मुद्दालाई लिएर जसरी नाकाबन्दी भयो, एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सम्बन्ध सुध्रन सकेको थिएन ।
त्यस्तै, भारत र चीनबीच दोक्लामलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । यी सबै सन्दर्भ जोडिएका थिए । मैले उहाँलाई बाढीपहिरोको ठूलो प्राकृतिक प्रकोप, कञ्चनपुरको जोगबुढादेखि पूर्वको झापासम्म ‘हेल्सिन्की कन्भेन्सन’ अन्तर्गत बोर्डरको ८ किलोमिटरसम्म बनाउन नपाइने मुद्दाहरू याद गराएको थिएँ । बाढीको प्रकोपको एउटा कारण ती बाँध पनि हुन् भन्ने छ । यी सबै सन्दर्भमा तपाईंको भ्रमणमा पनि एकपल्ट पुनर्विचार गर्नुस् है भनेर मैले भनेको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ।
अहिले उठेका यी विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि आवश्यक छ भनेर उहाँ जानुभयो । उहाँ जाँदा भारतले निकै राम्रो सद्भाव र सौहार्द्रता देखाएको छ । अनपेक्षित नै भनौं न, कार्यतालिकामै थिएन, तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएकै दिन बेलुकी भेट्ने कार्यक्रम तय भयो । मोदीजी हाम्रो प्रधानमन्त्री बस्नुभएको ठाउँको बाहिर आएर स्वागत गर्दै लैजानुभयो । यसलाई पनि एउटा राम्रो ‘जेस्चर’का रूपमा लिइन्छ ।
भारत उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण, नेपाली कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण तथा सरकारका माध्यमबाट सम्बन्ध सुदृढ गर्न चाहन्छ ।
समग्र रूपमा आतिथ्यतादेखि जुन सत्कार नेपालका प्रधानमन्त्रीले पाउनुभयो, यसले के देखिन्छ भने भारत उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण, नेपाली कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण तथा सरकारका माध्यमबाट सम्बन्ध सुदृढ गर्न चाहन्छ ।
अझ नयाँ उचाइमा लैजान चाहन्छ भन्ने सन्देश स्पष्ट थियो । पुराना सहमतिको कार्यान्वयन, कोसी ब्यारेज, पञ्चेश्वरदेखि कनेक्टिभिटी, रेल्वे प्रणाली स्थापना, उद्योग व्यापारमा खास गरेर हाम्रो निर्यातलाई सुविधाजनक पहुँच दिने कुरा उठाइयोस् पनि भनेको थिएँ । यी सबै विषय उठेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको आन्तरिक विषयमा बोलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ नि ?
हो, संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमै उहाँले जो बोल्नुभयो, त्यो नबोलेको भए हुन्थ्यो भनेर प्रतिपक्षीहरूले चर्को रूपमा उठाएका छन् । मधेसी दलहरूले उठाएका मागको कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर भारतले खुला रूपमै भन्दै आएको विषय हो ।
यसपालि संजोग के भयो भने संशोधनको विषय भारत भ्रमणअघि पेस गर्ने कि पछि भन्ने पनि थियो । तर, अगाडि नै निर्णयार्थ पेस गरियो संशोधनको प्रस्ताव पारित हुन पनि सकेन । संशोधन नभई मान्दैनौं भनिरहेको राजपाले संशोधन विफल भए पनि हामी मान्छौं भनेर निर्वाचन आयोगमा दलसमेत दर्ता गरिसकेको छ । यसलाई हामीले भारत भ्रमणसँग जोडेर हेर्दा विगतमा नाकाबन्दी पनि भयो ।
संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भारत सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा नेपाल सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीजीलाई बधाई पनि दिएको छ । यसको अर्थ संविधानको स्वागत गरेन भन्ने कुरा होइन । तराई–मधेसकेन्द्रित दलले संशोधन पारित नभई हुन्न भनेर दुई वर्षसम्म भन्नु तर अहिले संशोधन पारित नभए पनि मान्छौं र निर्वाचनमा जान्छौं भन्नुले मलाई के लाग्छ भने संविधानको कार्यान्वयन जुन महŒवपूर्ण पक्ष भनिरहेका थियौं, त्यसमा केही प्रगति भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका बाह्य आयामहरू हुन नपर्ने हो, तर खुला सिमाना, उत्पत्ति, संस्कृति, रोटीबेटीको सम्बन्धजस्ता विविधि कारणवश यो कुरा उठिरहेको थियो । नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिनुमा यो मुख्य कारण थियो । असोज २ गते तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुँदै छ ।
त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुँदा त्यो संविधान कार्यान्वयनको एउटा महŒवपूर्ण पाइला हुन्छ । यसपछि संविधानको सर्वस्वीकार्यता पनि अगाडि बढ्यो । संविधान जारी भएपछि नेपाल–भारतबीच लगातार उठ्दै आएको एउटा मुद्दा पनि समाधान भयो ।
सप्तकोसी बाँध र सुनकोसी डाइभर्सनको विषय भारतीय स्वार्थअनुकूल अगाडि बढाउन खोजिएको आरोप छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा बुँदा नं. २८ मा सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी डाइभर्सनको विषयलाई राष्ट्रहितविपरीत, राष्ट्रघाती सम्झौता भनी आलोचना भएको सन्दर्भमा मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
खुला सिमाना, उत्पत्ति, संस्कृति, रोटीबेटीको सम्बन्धजस्ता विविधि कारणवश यो कुरा उठिरहेको थियो ।
सो बुँदामा यी दुई परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) यथाशीघ्र तयार गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले सहमति गरेका छन् भनिएको छ । तर, यी दुवै योजना र शीघ्र भन्ने शब्दावली नयाँ होइन । गणतन्त्रपछिका खासगरी दुई माओवादी र एक एमालेका प्रधानमन्त्रीहरूको समयमा यी योजनाहरू अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।
अझ नोभेम्बर २४–२५, २०११ को नेपाल–भारत जलस्रोत संयुक्त समितिको बैठकको माइन्युट हेरे थाहा हुन्छ । फेरि यो सन्धि सम्झौता पनि होइन । विस्तृत अध्ययन गर्ने भन्ने हो । त्यो हाम्रो हितमा हुनुप¥यो । हाम्रो प्रवाधिक अवस्था पनि १९५० र १९६० को दशकजस्तो छैन । धेरै ज्ञान र अनुभव हासिल गरेका हाम्रा विशेषज्ञहरू छन् । यसमा एकसे एक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू पनि ल्याउन सकिन्छ ।
सन्धि र सम्झौता गर्ने अवस्था आउँदा हाम्रो संविधानको धारा २७९ ले संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्ने बाध्यता छ । त्यति सजिलो छैन । निश्चय नै यो विषयमा बृहत् छलफल र सहमति आवश्यक छ । तर, विरोध भएजस्तो केही विशेष तथा नयाँ विषय हैन । पहिलाकै निरन्तरता हो ।
भारतले नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न खोजेको भनेर भनिरहँदा यो भ्रमणबाट नेपालले के पायो ? के गुमायो ?
प्रधानमन्त्रीजी भारत जाने बेलामा राम्रो त होइन त संयोग नै भन्नुपर्छ, नेपालमा बाढीका कारण धेरै ठूलो धनजनको क्षति भयो, जसले गर्दा उहाँलाई भ्रमणका क्रममा यो विषय जोडदार रूपमा उठाउन पनि सन्दर्भ मिल्यो ।
कोसीको ५६ वटा ढोकामध्ये ३०÷३५ वटाभन्दा बढी नखोल्दिने गरेको गुनासो गरिँदै आइएको थियो । जतिबेला कोसी ब्यारेज बनाउने सम्झौता गरियो, भारतलाई १ सय ९९ वर्षका लागि चाबी दिइएको छ । लक्ष्मणपुर, खुर्दलोटनलगायतका थप १ दर्जन अरू बाँध छन्, जसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । तुरुन्त पुनर्विचार गरेर समयसीमासहित के गर्न सकिन्छ ? ठोस उपलब्धिमूलक कुरा पर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
लक्ष्मणपुर, खुर्दलोटनलगायतका थप १ दर्जन अरू बाँध छन्, जसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
त्यो बाँधका कारण भएका क्षतिको क्षतिपूर्ति, बाँध पर सार्न सकिन्छ कि ? यस्ता विषयमा एउटा समिति बनाएर चाँडो काम हुने भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सामान्य शब्दावली परेका छन् । कहिले कार्यान्वयन हुन्छ, पछिको कुरा भयो ।
कनेक्टिभिटी, बढी विद्युत् दिने कुरा, रेल्वे लिकको कुरा, पुराना सम्झौता कार्यान्वयनका कुरा त पहिलेदेखि नै भइरहेको हो । यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने हो, नभए त्यो एजेन्डामा दोहोरिरहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा सन् २००२ मा भारत जाँदा नै सम्झौता भएको पञ्चेश्वर अहिले जाँदा पनि अगाडि बढेन । अगाडि बढाउने त भनिएको छ, तर त्यसको कुनै डेडलाइन छैन । त्यस्तै, सन् २०१२ मा चारवटा आईसीपी विराटनगर, भैरहवा, वीरगन्ज र नेपालगन्जमा राख्ने भनेको वीरगन्जमा मात्र बल्ल सुरु हुन लागेको छ । संयुक्त वक्तव्यमा परे पनि कार्यान्वयन नभएका यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । अहिले संयुक्त वक्तव्यमा प¥यो भनेर खुसी हुनुको के अर्थ छ र ?
त्यही १ सय मेगावाट बिजुली तुरुन्त आउने कुरा भयो । अरू त संयुक्त कमिटीहरू छन् । त्यसको बैठक बारम्बार बस्नुप¥यो । त्यो भइरहेको छैन । हामीले अलिकति दबाब पनि दिनुप¥यो । सफ्ट लोनमा भनिएको छ । तर, त्यो आइरहेको छैन । यतिसम्म कि भारतले कबुल गरेको र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दिन्छु भनेको कुरामा पनि बल्ल सहमति भयो ।
यस्तो सुस्ततामा हामी पनि जिम्मेवार छौं । उसलाई मात्र दोष दिएर पनि भएन । खै, तिमीहरूबाट कार्यक्रम नै आएन । आवश्यक डकुमेन्ट आएन भनेर उसले भन्न सक्छ । नेपालको स्वाभिमानका लागि सुहाउने विषय त होइन, तर सधैं हामी के पाउँदै छौं ? के आउँदै छ ? भन्ने अपेक्षा बोकेर जान्छौं हामीहरू ।
दिने–लिनेभन्दा पर दुवै स्वतन्त्र राष्ट्र हुन् । दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन् भन्ने धारणाको विकास नै भएन नि, होइन ?
सार्वभौमसत्तासम्पन्न, स्वाभिमानी राष्ट्र भन्छौं, तर सम्बन्धहरू असमान देखिन्छ । भूगोल, जनसंख्या, अर्थतन्त्र, प्रविधि, सैन्य शक्तिका हिसाबले त असमान नै देखिन्छ । त्यसबाहेक पनि हाम्रा आवश्यक्तालाई हामीले प्रस्ट रूपमा पहिचान नै गरेनौं । दोस्रो कुरा, आन्तरिक सहमति कहिल्यै गरेनौं । जस्तो, प्रमुख दलहरूका बीचमा यो कुरा गर्दै छौं । यसरी गर्ने भनेर कहिल्यै सहमति गरिएन ।
सुस्ततामा हामी पनि जिम्मेवार छौं । उसलाई मात्र दोष दिएर पनि भएन ।
एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेको कामलाई अर्को प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेर अघि बढाउने संस्कार नै भएन । मेरो पालामा नयाँ के ल्याउने भन्ने जुन मानसिकता छ, यसले सपिङलिस्टमा नयाँ आइटम राख्ने कुराले पनि कुरा धेरै तर काम ढिला भएको छ । हाम्रो हितमा रहेका प्रोजेक्टमा त हामीले बढी चासो राख्नुपर्छ । तर, त्यो देखिँदैन । सिँचाइ, वाणिज्यका सचिव परिवर्तन भइरहन्छन् । यसले पनि समस्या भएको छ ।
भारतसँग व्यापारघाटा चुलिँदो छ । तर, यो विषय किन यस्ता भ्रमणमा ओझेलमा पर्छन् ?
हाम्रो कुल बजेटको करिब ८० प्रतिशत व्यापारघाटा भारतसँग मात्र छ । जबसम्म यो व्यापारघाटा घटाएर लैजाँदैनौं तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर हुन्छ । हामी चाहन्छौं, हुन त नहोस् त्यस्तो, तर भोलि सानो आकारको युद्ध दोक्लममा भयो भने सारा बोर्डर सिल हुन्छ ।
काँकडभिट्टाबाट करिब १ सय ३० किमिको दुरीमा दोक्लम पर्छ । युद्ध भयो भने त तुरुन्त भारतले बोर्डर सिल गर्छ । चीनबाट केही आउँदैन । यस्तो बेलाका लागि हाम्रो तयारी केही छैन । परनिर्भर अर्थतन्त्र छ । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गर्नुप¥यो ।
भारतसँगका ठूला आयोजना किन अघि बढेनन् ?
समस्या के हो भने नेपालमा एउटा राजनीतिक समूहमा ‘इन्डो फोबिया’ छ । भारत आउनासाथै सबै लगिहाल्छ, सिध्याइहाल्छ भन्ने छ । जहाँ भारतले हात हाल्छ, गएर विरोध गरिहाल्ने । पहिला त बम नै पनि पड्काए । उनीहरूलाई लगानीको सुरक्षा नै भएन । नेपालमा एउटा ठूलो समूह भारतविरोधी भावना बनाएर बसेको छ । भारतको विरोध गर्नु नै राष्ट्रवाद हो भनेर त्यो समुह ठान्छ ।
एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेको कामलाई अर्को प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेर अघि बढाउने संस्कार नै भएन ।
१९५० देखि नै कम्युनिस्ट आइडियोलोजी बोक्नेहरूमा यो सुरु भएको हो । उनीहरू हामीलाई भारतीय दलाल भन्थे, हामी उनीहरूलाई चीनको दलाल भन्थ्यौं । उनीहरूमा भारत नेपालको शत्रु हो भन्ने छ । यस्ता कारणले पनि भारतसँगका आयोजना अघि बढ्न ढिला भयो ।
लगानी गर्न पनि नदिने, आफू पनि गर्न नसक्ने हो भने त अवस्था झन् बिग्रँदै जाने देखिन्छ । अब कसरी अघि बढ्नुपर्ला ?
एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा, राप्रपा सबै दल एक ठाउँमा बसेर आर्थिक आत्मनिर्भरताको रोडम्याप बनाऊँ । यसमा कुनै सिद्धान्तमा प्रभावित नहोऔं । कार्यकर्तालाई पनि त्यसमा प्रतिबद्ध बनाउनुपर्छ ।
चीन पनि नेपालप्र्रति भारतभन्दा बढी सकारात्मक त देखिएन नि ? उसले लिएका आयोजनाहरूको अवस्था पनि भारतले लिएको भन्दा फरक देखिँदैन । तातोपानी नाका अझै खुलेको छैन । केरुङको हालत खराब नै छ ।
हेर्नुुस्, हाम्रो नीति पनि ‘जिकज्याक’ छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत जाँदा २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भयो । ११ नम्बर बुँदामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा साझा धारणा बनाउने र संयुक्त राष्ट्रसंघको बृहत्तर सुधारका लागि साझा दृष्टिकोण’ बनाउने भन्ने थियो । त्यसको तत्कालै प्रभाव प-यो ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण रोकिनुको कारण त्यो पनि हो । पछि ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सम्झौता गर्नुभयो र चीन गएर सम्बन्ध सुधार्न लाग्नुभयो । कहिलेकाहीँ हामी पनि अपरिपक्व निर्णय गर्छौं । भारतको अहिले पनि सानो भाइ ठान्ने छ भने चीनको अलि परिपक्व कूटनीति छ । उनीहरू त्यसरी प्रस्तुत हुँदैनन् । यहाँको दूतावाससँग छलफल गर्नुप¥यो । यहाँको चेम्बर र त्यहाँको चेम्बरबीच संवाद गराइरहनुप¥यो ।
नेपालमा एउटा ठूलो समूह भारतविरोधी भावना बनाएर बसेको छ । भारतको विरोध गर्नु नै राष्ट्रवाद हो भनेर त्यो समुह ठान्छ ।
सारा शक्ति राजनीतिमा केन्द्रित भयो । परिपक्व सम्बन्ध हामीले स्थापित गर्न सकेनौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले मात्र हाम्रा चार जना प्रधानमन्त्रीको स्वागत गरिसक्नुभयो । जुन बेला शेरबहादुरजी भारतमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला चीनका परराष्ट्रका प्रवक्ताले बोलेका छन् । यसको मतलब उनीहरूले एकदमै धेरै चासोका साथ हेरिरहेका छन् भन्ने पनि हो ।
हामीले भारत र चीन दुवैको लगानीबाट फाइदा पनि लिन सकेनौं नि, होइन ?
यसको प्रमुख कारण स्थिरता भएन । केपी ओली जाँदा एउटा कुरा गरेर आउनुभयो । उहाँले एक प्रकारको रिस पनि देखाउनुभयो । पुष्पकमल दाहालजी हिजो भारतमै बसेर विद्रोह गर्नुभयो । १२ बुँदे गर्दा दिल्लीमै घुमिरहनुभएको थियो । सबैलाई थाहा छ । बीचबीचमा उतारचढावका कारण भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ मानसिकताले ग्रस्त हुनुभयो ।
त्यसले गर्दाखेरि नामचाहिँ माओवादी छ, कति विश्वास गर्ने, नगर्ने भन्ने भयो । राष्ट्रको स्वार्थ पहिला भन्ने नै भएन । पहिला, राष्ट्रिय हित के हो हाम्रो ? त्यो तय गर्न सकेनौं । हाम्रो स्वतन्त्र विदेश नीति छैन । दुवै देशसँग समदूरी स्थापित गर्ने, परिपक्व रूपमा लैजाने, जो राष्ट्रिय हितमा होस् । सम्बन्ध देशका लागि होइन, आफ्ना लागि बनाउने काम भो ।
महेन्द्रलाई ठूलो अवसर प्राप्त भयो । भारत तत्कालीन चीनसँग परास्त भएको अवस्था थियो । चीन पूरै दक्षिण एसियामै नेपाल, भारतको मार्ग भएर कम्युनिज्म निर्यात गर्न लागेको थियो । नेपाललाई नै चिनियाँ कम्युनिस्ट दर्शन निर्यात गर्ने ट्रान्जिट बनाउन खोजेको थियो । त्यो बेलामा फरक परिस्थिति थियो । राजा महेन्द्रले केही फाइदा लिएका छन् ।
१९६९ तिर होला, कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा सारा चेकपोस्ट हटाउन सफल पनि भएको हो । राजा वीरेन्द्रसम्म भारत र चीनसँग परिपक्व रूपमा सम्बन्ध राखिएको थियो । कहिलेकाहीँ त राजाहरू पनि उत्ताउला भए । १३ औं शिखर सम्मेलनमा चीनलाई पर्यवेक्षक बनाउनुपर्छ भने । भारतले अफगानिस्तानलाई बनाउनुपर्छ भन्दा भिटो प्रयोग गर्छु भनेर अडान लिए ।
जबसम्म यो व्यापारघाटा घटाएर लैजाँदैनौं तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर हुन्छ ।
विदेश नीतिलाई राजाले नै नियन्त्रण गरेका थिए । त्यसले गर्दा उनीहरूले धेरै हिसाबले ट्र्याकमा ल्याएका थिए । पछि बहुदल आएपछि पनि जब किसुनजीले १९९९ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत जानुभयो । उहाँले दुईवटा कुरामा अडान लिनुभयो । भारतमा त्यतिबेला भीपी सिंह प्रधानमन्त्री थिए । भारतका पत्रकारले नेपालको सेनामा तराईका मानिसलाई किन लिनुहुन्न ? भनेर सोध्दा उहाँले तिम्रो प्रधानमन्त्रीलाई सोध भनेर जवाफ दिनुभयो । गोर्खापल्टनमा भारतले चाहिँ नेपालका मधेसी भाइहरूलाई भर्ना नलिने अनि नेपाललाई चाहिँ सोध्ने हो भन्ने आशय उहाँको जवाफमा थियो । अर्को सैन्य सामग्री चीनबाट ल्याएका रहेछौं ।
१९५० को सन्धिअनुसार जानकारी गराउनुपर्ने हो, यसमा के छ भनेर सोधियो ? उहाँले फाइल हेरेँ, तिमीहरूकोमा महँगो रहेछ, चीनबाट सस्तो भएकाले उतैबाट ल्यायौं भनेर जवाफ दिनुभयो । त्यो उचाइ भएको, आत्मविश्वास लिएर जाँदा डिल गर्न सहज हुन्छ ।
भारत र चीनको कुरा गर्दा नेपालका राजनीतिक दलको झुकाव एकातिर बढी देखियो नि?
राजनीतिक परिवर्तनमा भारतसँगको सम्बन्ध बढ्दै गयो । बहुदल स्थापना, माओवादी आन्दोलनपछि राजनीतिक सन्तुलन बिग्रियो । चीनले पनि यिनीहरूको राजनीतिक झुकाव दक्षिणतिरै बढी रहेछ भनेर हेर्न थाल्यो ।
एउटा कम्युनिस्ट राष्ट्रले राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने, सहयोग गर्ने भनेको त अनौठो हो नि । एक चीन नीति, चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने, खम्पा विद्रोह दबाउन दरबारले खेलेको भूमिकाका कारण पनि एउटा विश्वास थियो ।
चीनको सम्बन्धमा दरबारले भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध राख्दैन भन्ने थियो । अहिले हामी आर्थिक सन्तुलन गर्न खोज्छौं, तर राजनीतिक कारणले पछिल्ला वर्षहरुमा सम्बन्ध एकातिर ढल्किएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबाट चीन थप चिढियो कि उसले स्वाभाविक रूपमा लिएको छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
वान टु वानमा के कुरा भयो त्यसको रेकर्ड त हुने कुरा भएन । हामीमा संस्थागत मेमोरीमा राख्ने चलन छैन । मलाई लाग्छ, अहिलेको भ्रमणलाई चीनले स्वाभाविक रूपमै लिएको छ । ऊसँगको सम्बन्धमा चिसो आउने कुनै काम भएको छैन भन्ने लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री भारतपछि अब चीन पनि जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । भारत भ्रमणको समीक्षा गर्दै गर्दा चीन जादाँचाहिँ केमा ध्यान दिनुपर्ला ?
‘वान बेल्ट वान रोड’को सहमति भएको छ, त्यसलाई रोडम्याप तयार गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यहाँ पनि व्यापारघाटा बढ्दो छ । उताबाट माल आउँछ, तर यताबाट रित्तै जानुपर्छ । नेपालबाट चीन जाँदा सहज आवागमनको अवस्था बनाइनुपर्छ ।
व्यापारीहरूलार्ई सहज तरिकाले बजार खोज्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । अर्को मुख्य कुरा, अहिले चीन वैदेशिक लगानीका लागि सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । उनीहरूका लागि खासगरी जलस्रोतको क्षेत्रमा एपडीआई भिœयाउने, रेल्वे लिंक लुम्बिनीसम्म लैजाने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भारततिरको आर्थिक परनिर्भरता बढ्दै गएको छ, त्यसलाई कम गर्न चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा सडक सञ्जालले जोड्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
लगानी वृद्धि गर्न लगाउने । चीनसँग आर्थिक सहमति गर्ने नै हो । राजनीतिक रूपमा एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो । लिपुलेक र जिन्स्याङका कुरा उठ्न सक्छन् । चीनका चासो भारतलाई नचिढ्याई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिने । आर्थिक फाइदा लिने विषय नै मुख्य कुरा हो ।
भारत नेपाली कांग्रेस व्यापारघाटा प्रधानमन्त्री नेपाल–भारत–चीन डा. नारायण खड्का